Madaxweyne Farmaajo iyo safarkiisa ugu horeeya | allsanaag
Madaxweyne Farmaajo iyo safarkiisa ugu horeeya
Safarka ugu horeeya ee madaxweyne Farmaajo iyo meesha ugu haboon Safarkiisa
Madaxweynaha Soomaaliya ee dhowaan la doortay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, oo xukunka qabtay Soomaaliya oo ay ka jirto abaar aad u xun iyo Biyo La’aan, ayaa hadana waxa jira degaano ka mid ah Soomaaliya, Puntland gobolka Bari oo ay roobab ka da’een.
Roobkaas ka da’ay gobolka Bari, ayaa waxa u soo hayaamay reer Guuraagii Gobolada Awdal. waqooyi galbeed, Togdheer, Sanaag, Sool, Bari, Nugaal iyo Mudug, oo halkaa ka helay daaqsin, biyo iyo soo dhowayn fiican oo ay Soomaalinimo ka jirto oo halkaa loogu soo dhoweeyey.
Sidaas awgeed madaxweyne Farmaajo degaanka ugu fiican oo Soomaali oo dhibaataysan oo hadana wada midaysan oo Soomaalinimo ka muuqataa ay ku wada nool yihiin ama wada joogaan waa bariga baadiyaha gobolka Bari. Waana degaanka ugu fiican uu madaxweynhu safarkiisa ugu horeeya ku tegi karo. sababtoo ah safarkiisa looma arkayo mid Urur, xulafaysi, diimeed, qabyaalad. Laaakiinse waxa loo arkayaa Calaamad ka mid ah calaamadihii lagu doortay ee Soomaalinimada iyo Dad jacaylka.
Arinta labaad oo mudan in madaxweyne Farmaajo safarkiisa ugu horeeya ku tago baadiyaha gobolka Bari, waa wanaagii ay sameeyeen dadkii Soomaaliyeed ee loogu martida ahaa Gobolka Bari iyaga oo xeerinaya oo ka dhabeeyey Islamnimo, Soomaalinimo, wada jir iyo dul qaadkii ay la qaybsadeen walaalahooda Soomaaliyeed intii yarayd oo kheyraadka ahayd oo ay haysteen . Wanaag iyo dhiira gelin ka fiican ma jirto oo bulshadaa Soomaaliyeed loogu abaal gudo oo ka Fiican Madaxweynaha Soomaaliyeed Maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku yiraahda ” Waad ku mahadsan tihiin wanaagii aad samayseen , Soomaalida kalena Tusaale fiican ayaad u tihiin. Aniguna taageero ayaan idiin muujinayaa
← Xasan Culusoow iyo la taliyaashiisii jarka ka tuuray ¡¡¡Wuxuu Geed Ku Meeraba Cali Khaliif Siilaanyo Maw Galay¡¡¡”Abdullahi Spanish” →